Cunnooyinka soodhiyamka oo yaraada ama sida loo yareeyo qaadashada milixda | Ragga Stylish
Cunnooyinka soodhiyamka ee hooseeya waxay beddel u yihiin caadooyinka cunidda ee hadda jirta, taas oo u muuqata inay kujirto sodium aad u badan sababtoo ah cuntada degdega ah iyo cuntooyinka warshadaysan.
Taasina waa in badan oo ka mid ah soodhiyamka ku jira cuntadaada uusan ka imaan milixduhu, laakiin wuxuu galayaa cuntada la warshadeeyay. Haddii cuntada degdegga ah iyo cuntooyinka la warshadeeyay ay ku badan yihiin cuntadaada, waxay u badan tahay inaad dhaafayso xadka soodhiyamka maalin kasta, oo ah maalin walba 1.500 oo milligram. Cunnooyinka soodhiyamka ee hooseeya waa bar bilow wanaagsan oo lagu xalliyo xaaladdan halista ah ee caafimaadkaaga.
1 Talooyin ku saabsan qaadashada sodium ka yar
1.1 Tixgeli cuntada Mediterranean
1.2 Ha ku darin milix ilaa aad dhadhamiso
1.3 Hubi calaamadaha
2 Sida loo ilaaliyo cuntada soodhiyamka ee ka hooseysa guriga
Talooyin ku saabsan qaadashada sodium ka yar
Dabiici ahaan, soodhiyam xad dhaaf ah oo ku jirta cuntada ma aha arin si fudud loo qaadan karo. Iyo, sidaad horayba u ogayd, milix badan oo la cunaa waxay kordhisaa halista dhiig karka, kaasoo horseedi kara istaroog iyo cudur wadne.
Sidaa awgeed, xakameynta soodhiyamku waa inay noqotaa mid ka mid ah mudnaanta marka la qorsheynayo qorshe cunid. Halkan waxaan ku sharaxaynaa sida loo qaato qaab nololeedka sodium ka hooseeya si loo ilaaliyo halbowlayaasha iyo caafimaadka guud.
Haddii aad rabto inaad raacdo cunto sodium ah oo hooseeya, waa inaad la qabsataa cunista cuntooyinka yar ee warshadaysan kuna beddelato cunnooyinka cusub… Markasta oo ay sii badato. Cunista cunnooyinka badan ee cusub waa mid ka mid ah arrimaha bulshada ee sugaya, iyadoo ku habboon waxyaabo badan awgood, oo ay ku jiraan yaraynta sodium-ka ay u baahan tahay. Cuntada badda Mediterranean waa fikrad aad u fiican, maadaama ay ku jiraan miro iyo khudaar badan.
Iyo inaad dhadhamiso cuntadaada, waa inaad keydisaa milixduhu cuskato oo aad ku tiirsanaato dhir udgoon, hilib iyo maraq maraq, miraha liinta iyo dabcan toonta iyo basasha. Ku beddelashada cusbada xulashooyinkan ma aha oo kaliya caafimaad, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa dhadhanka suxuunta, iyadoo kordhineysa awooddooda iyo tirada nuances.
Tixgeli cuntada Mediterranean
Fiiri maqaalka: Cuntada Mediterranean. Qaabkan lagu arko cuntada (iyo sidoo kale fahamka nolosha) waxay ku saleysan tahay cuntada cusub. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo raaco oo loo arko dhammaan faa'iidooyinkiisa caafimaad.
Ha ku darin milix ilaa aad dhadhamiso
Dhadhamiya cuntada ka hor intaadan cusbo ku darin. Marar badan si otomaatig ah ayaa loo sameeyaa, laakiin haddii aad horay isugu daydo, marar badan waxaad u maleyneysaa inaad gunaanadka tahay inaan loo baahnayn in cusbo lagu daro (gaar ahaan markay tahay cunnooyinka cusub iyo kuwa xilliyeed). Milix yar oo milix ah halkan iyo halkaa waxay umuuqdaan kuwo aan qiimo lahayn, laakiin hadii ay kudarmaan wax kabadan usbuuc ama bil waxay isu badalayaan cusbo aad ufara badan. Sidaa darteed, istiraatiijiyaddani waxay kaa caawin doontaa inaad si weyn u yareyso qaadashada sodium.
Fikrad ahaan, natiijooyinka cuntada soodhiyamku ku yar tahay si dhakhso leh oo ka muuqasho badan ayaa ah in had iyo jeer la cuno mid cusub, laakiin gebi ahaanba la bixi leh cuntooyinka la baaraandego waa hawl adag. Waxaan tixraacnaa cuntada baakadeysan (ha ahaato qasacad, caag ama leben), hilibka la warshadeeyay sida sausage, badarka, waxyaabaha rootiga lagu dubo iyo rootiyada qaar.
Waxa gacantaada ku jira waa inaad ku sharraxdo astaanta leh soodhiyam ka yar. Soo-saareyaashu waxay ka warbixiyaan halabuurka wax soo saar ee sumadaha, sidaas raadso sodium oo isbarbar dhig inta kale si aad u go'aamiso ikhtiyaarka kuugu habboon.
Sida loo ilaaliyo cuntada soodhiyamka ee ka hooseysa guriga
Miyaad wax ka cuntaa banaanka? Taasi waxay sii murgineysaa hawsha ah in soodhiyamka la xakameeyo, maadaama aanan garan karin sida wax walba oo aan ku dalbanno maqaayadaha loo diyaariyo. Sikastaba, waxaad u adeegsan kartaa dareenkaaga inaad ku doorato ikhtiyaarka leh soodhiyam ka yar markii lagugu qasbo inaad wax ka cunto. Makhaayadaha cuntada degdega ahi waxay ku kooban yihiin isku dubarida cuntada, sidaa darteed qadarka cusbada lama beddeli karo. Dhinaca kale, makhaayadaha dhaqameed waxay ka diyaariyaan cunooyin badan cuntada cusub iyo waqtiga la joogo (ama uguyaraan waa inay ahaataa), taas oo u oggolaanaysa in milix yar lagu daro ama aan lagu darin wax haddii macaamilku codsado.
Iyo haddii aadan haysan ikhtiyaar aan ka ahayn inaad ka cunteeysid mid ka mid ah maqaayadahaas, waxaad had iyo jeer dalban kartaa suxuunta ugu caafimaadka badan (adoo mar kale isticmaalaya dareen) ka boodida qaybo haddii ikhtiyaarka kaliya ee suurtogalka ahi yahay cunnada soodhiyamku ku badan yahay oo iska ilaali suugada (ketchup waa mid ka mid ah laakiin kaliya maaha) ama u isticmaal qaddar yar.
Tallaabooyinka sida dalbashada qayb yar ama raacitaanka cuntada oo leh salad halkii laga heli lahaa, tusaale ahaan, shiilannada shiilan ee Faransiiska, ayaa kaa caawin doona inaad yareyso joogitaanka sodium ee cuntadaada, iyo sidoo kale inaadan cunin kaloriin ka badan inta aad gubi karto, a caado oo, xusuusnaata, u horseedda cayil iyo cayilnaan. Marka laga hadlayo saladhka, dhammaantood kuma wada hooseeyaan soodhiyamka: isha ku hay saytuunka, farmaajada iyo labiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cunto soodhiyam ah oo yar